Dilal kala duwan oo maanta ka dhacay qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho |
Dilal kala duwan oo maanta ka dhacay qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho
Waxaa Maanta Dilal kala duwan Xaafado katirsan Degmooyinka Kaaraan iyo Hiliwaa loogu geestay qof rayid ah iyo askari katirsanaa Ciidanka Milatariga Soomaaliya.
Askari katirsan Ciidanka Ilaalada Degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir ayaa maanta meel aan ka fogeyn xarunta Degmada Kaaraan, waxa uu ku dilay nin rayid ah oo la sheegay in uu ahaa nin garaashla ah.
Dilka ninkan aya ayimid kadib markii uu muran dhax maray isaga iyo dad uu ka kireestay garaash uu dagnaa , waxaana Askar katirsan ciidanka Dowlada goobta keensatay dadkii ninkan muranka kala dhaxeeyay kuwaa oo goobtaasi ku dilay ninkii garaashka dagnaa.
Gudoomiyaha Degmada Kaaraan ayaa sheegay in uu fakaday gacan ku dhiiglihii dilka geestay , waxa uuna intaa raaciyay in ay gacanta ku hayaan dad kale oo gacan ku lahaa dilka manta loo geestay ninka rayidka ah.
Dhinaca kale Kooxo Bistoolado ku hubeesan ayaa maanta Isgooska SOS ee Degmada Hiliwaa waxa ay ku dileen Askari katirsan Ciidanka Dowlada Soomaaliya , waxaana goobta ka baxsaday kooxihii dilka u geestay askariga.
Amaanka Magaalada Muqdisho ayaa mudooyinkii dambe sii xumaanayay , waxaana saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan Magaalada Muqdisho loogu dilay Xildibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo dad rayid ah.